Zara ụzọ abụọ ndị nwere mkpirisi bermuda | Bezzia
Zara uzo abuo nke nwere obere bermuda
Maria onyekwere | 01/04/2021 18:00 | Emelitere ka 30/03/2021 00:27 | Kedu ihe m ga-eyi
N'ileghachi anya na akwụkwọ ọhụụ na katalọgụ Zara, ọ tụrụ anyị n'anya site na ịkọwapụta na mpempe akwụkwọ abụọ nwere nchịkọta ọhụrụ ahụ. Mkpokọta nke bermudas ma ọ bụ mkpụmkpụ na uwe elu ọzọ dị iche iche nke dị iche na uwe ọ bụla.
Jaketị, blazers, uwe elu nwanyị, akwa mkpuchi, mkpụmkpụ n'elu ... A na-ahọrọ uwe elu dị ka setịpụrụ ụdị. Moredị ejiji a na-ejikarị jaketị emechaa, nke kachasị oge ọkọchị nwere mkpụmkpụ na nke kachasị mma na blazer. Kedu ụdị gị? Chọta ya n'etiti usoro ndị Zara.
Mpempe akwụkwọ abụọ: ọnọdụ
N'etiti akụkụ abụọ, ndị nọ sorbet agba dị ka odo, pink ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Emechara ihe ndị a na jaketị ma ọ bụ nchacha ma anyị nwere ike ịchọta ha na katalọgụ Zara jikọtara ya na obere mkpụmkpụ dabara ma ọ bụ iche na ọcha.
Enwekwara otutu na katalọgụ nke ndi mmadu ihe eji ede ihe checkered ma ọ bụ houndstooth ebipụta. Mbipụta na ị nwere ike ịchọta ma na nke ochie na nke ọcha na nke ọzọ na ndị ọzọ mara mma ma na-atọ ụtọ na blues na yellows dị ka protagonists.
N'ime foto abụọ nke foto Zara anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ myirịta. Ọtụtụ n'ime ha nọ akwa-waisted, obosara-ụkwụ bermuda nịịka, na mgbakwunye na ahụ nwere nkọwa dịka ruffles, ụta ma ọ bụ mkpuchi. Jikọta ha akpụkpọ ụkwụ na ala jute ma ị ga-adị njikere ịnụ ụtọ oge ọkọchị.
Ndị ahụ bụ usoro mana ụdị aghụghọ dị iche iche n'ụdị ndị a buru ibu dịka ị ga-enwe oge iji hụ. Nwere ike ịchọta site na uwe dị iche iche na-acha ọcha ma ọ bụ nke na-acha ọcha dị ka nke e gosipụtara na mkpuchi anyị, iji nwee ntụrụndụ crochet na ụda oroma nke ọ ga-esiri gị ike ịghara ịhụ. Chọpụta ha na katalọgụ Zara!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Zara uzo abuo nke nwere obere bermuda
Moisturizing creams ilekọta akọrọ akpụkpọ